Vertical Cargo Simudza Vagadziri & Vatengesi | China Vertical Cargo Simudza Fekitori
Vertical cargo kusimudzaitsika yakagadzirwa pachigadzirwa chemafekita erevheta indasitiri. Midziyo inoshandisa ma hydraulic cylinders sesimba guru uye inotyairwa nemaketani anorema-tambo netambo dze waya kuti ive nechokwadi chekuchengetedzeka kwemuchina. Vertical yekutakura erevheta haidi makomba uye makamuri emakamuri.
Njanji ina dzakatwasuka nhumbi dzinosimudza dzine zvakawanda zvakagadziridzwa mabhenefiti kuenzanisa nemaviri njanji yekutakura erevheta, hombe chikuva saizi, hukuru hukuru uye yakakwirira chikuva kukwirira. Asi inoda yakakura nzvimbo yekumisikidza uye vanhu vanofanirwa kugadzirira matatu chikamu AC simba kwariri.
Njanji mbiri dzakasimudza nhumbi dzinosimudza dzinogona kuve tsika inoitwa neicho chinodiwa kubva kumutengi, saizi yepuratifomu, kugona uye max chikuva kukwirira kunogona kuitwa hwaro pane zvaunoda. Asi saizi yepuratifomu haigone kuve yakakura kwazvo, nekuti panongova nemarairi maviri chete akagadzirisa chikuva Kana iwe uchida chikuva hombe ....
China yakasimudza nhumbi inosimudza inonyanya kukodzera kumakomba asingagone kucherwa, kuvakisa imba yekuchengetera, masherufu matsva, nezvimwewo, uye zviri nyore kuisa nekuchengetedza, uye yakanaka. , Kuchengetedza uye nyore mashandiro ekushandisa. Ehezve, kugadzirwa kwemidziyo kunofanirwa kuitiswa zvinoenderana neicho chaicho, chakatarwa chekumisikidza nharaunda uye zvinodiwa nemutengi. Kutanga, tsika yakaitwa kusimudza nhumbi inoda kugadzirwa zvinoenderana nedhata uye neruzivo rwunopihwa nemutengi. Mushure mekusimbiswazve kwekusimbisa kuti hapana dambudziko, kugadzirwa uye kuisirwa kumisikidza uye kutumwa kunoitwa. Mirira basa. Nekuti mira midziyo inosimudza inofanirwa kuve yakagadzirirwa kugadzirwa, isu hatina kuigadzira yakajairwa modhi yacho, asi zvese zvakagadzirwa kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.